बिज्ञान-तथा-प्रविधि – Paluwa Khabar
जस्ले ७३ जनाको ज्यान बचाए उसैलाई उडान गर्न रोक आखिर किन ??? (भिडियोसहित)
Posted in main-news, बिज्ञान-तथा-प्रविधि
केहि दिअघि काठमाडौँबाट विराटनगर तर्फ उडेको बुद्धएयरको प्लेनमा आकस्मिक समस्या देखिएपछि सफतापुर्वक सुरक्षित ल्याण्डिङ गराएका पाइलट आंगेलु शेर्पा र पेमा लामालाई उडान गर्न रोक लगाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुद्धएयरका पाइलट आंगेलु शेर्पालाई उडान भर्न रोक लगाएको हो । उक्त दिन के भएको थियो र किन प्लेनमा समस्या देखिएको भन्दै घटनाको छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि विमान चलाउन रोक लगाइएको बुद्धएयरले जनाएको छ । घटनाको छानविन भइरहेकाले तत्कालका लागि पाइलट शेर्पालाई उडान भर्नमा रोक लगाइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार घटना छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि पाइलट शेर्पालाई उडान नर्भन भनिएको हो । उनले भने, ‘यो नियमित पक्रिया हो ।’ गत सोमबार काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्धएयरको विमान त्यहाँ अवतरण गर्ने क्रममा
हार्दिक बधाई यी दृष्टिविहीन जसले शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षामा एक नम्बरमै निकाले नाम
काठमाडौँ बैशाख उमेरमा भर्खरै ३६ टेकेका कलाधर भण्डारीलाई झट्ट देख्नेले दृष्टिविहीन भनेर ठम्याउन सक्दैनन् । खाइलाग्दो शरीर, आँखामा चस्मा, निडर स्वभाव, चिटिक्क कपाल, कोटपाइन्टमा सजिने कलाधर आँखाले सृष्टि नदेखेका युवा हुन् । सृष्टि नदेखेपनि अध्ययन र भरिएको ज्ञानले उनले विश्व देखेका छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला******लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला बडैयाताल गाउँपालिका–६ रानीपुरमा जन्मिएका भण्डारी स्थायी शिक्षक हुन् । भाग्यले ठगिए पनि कर्ममा लगनशील भएर अगाडि बढेका कलाधरले जीवनमा कहिल्यै हन्डर/ठक्कर खाएनन् । भण्डारीको लगनशीलताले दिनचर्या मात्र होइन, जीवनशैली पनि फेरियो । दृष्टि नभए पनि उनलाई कसैले अवरोध गरेन । उनी अगाडि बढिरहे, सफलता चुमिरहे । देशभर अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार र उनीहरूलाई समाजमा स्थापित गर्न पथ प्रदर्शकको रूपमा भण्डारी लागेका
अन्तत, नेपालमै बन्यो काठको कार,मुल्य सुन्दा होस उड्यो,लिम्बू भाइले सन्सार चकित पारे,नेपाली युवा बैज्ञानिक भेट्न घरमै पुगे जङ्गि बाबा,(भिडियो सहित)
Posted in बिज्ञान-तथा-प्रविधि, समाचार
अन्तत नेपालमै बन्यो काठको कार,मुल्य सुन्दा होस उड्यो,लिम्बू भाइले सन्सार चकित पारे,नेपाली युवा बैज्ञानिक भेट्न घरमै पुगे जङ्गि बाबा (भिडियो सहित) पछिल्लो समय नेपालीहरुले नसोचेकै काम गरेर देखाएका छन । हरेक कुरामा अगाडी रहने नेपालीको सन्सारमै अचम्मको प्रसंशा सुनिन्छ । बिरताको हिसाबले गोर्खलीदेखि सबै डराउछन । वीर गोर्खालीको कथा सुनेर प्राय सबैको होस उड्छ । गौरबका कुराहरुमा एकपछी अर्को गर्दै बिश्व चकित बनाउदै आएका नेपाली देखेर सबै देशका मान्छे छक्क पर्छन । सानो देश थोरै जनसंख्या तर सन्सार डराउने किसिमको अवस्था एकजुटता देखेर साच्चै गौरब गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक पक्षमा एक एक गर्दै नेपालीहरुले छक्क पार्दै आएका छन । बिज्ञानको पाटोमा पनि नेपाल अगाडी बढ्दै गरेको छ । नेपालमै विभिन्न कुराहरु आबिस्कार समेत हुन थालेपछी केही आशा पलाएका छन । नेपाल आबिस्कार केन्द्रले गरेको प्रगत
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) को प्रयोग अत्यधिक मात्रामा हुन थालेको छ । सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा असर नपुग्ने गरी यसको उडान अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यदि तपाईंले सरकारी नियम थाहा नपाएरै ड्रोन उडाइरहनु भएको छ भने कानूनी झमेलामा पर्न सक्नुहुन्छ । अहिलेको समयमा विश्वव्यापी रुपमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वातावरण, भूगोल, कला, संस्कृति, मनोरञ्जन, विकास, विपत व्यवस्थापन, सूरक्षा तथा संचार जस्ता क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । अध्ययन, अनुसन्धान, सूचना संकलन, सर्वेक्षण तथा नक्साङ्कन एवम् छायाङ्कन गर्ने उद्देश्यले ड्रोनको प्रयोग बढ्दै गएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको हो । २०७५ को फागुनमा गृहमन्त्रालयले यसका लागि छुट्टै कार्यविधि जारी गरेको थियो । जसअनुसार ड्रोनका लागि नेपाल नागरिक उड्डय
राष्ट्रपति कार्यालयकाे ट्विटर एकाउण्टमा ह”मला
काठमाडौं, कात्तिक १२ । राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले राष्ट्रपति कार्यलयको ट्वीटर एकाउन्ट तीन पटक हमला भएको दावी गर्नुभएको छ । पटक पटकको हमलापछि @SHITALNIWAS नामको ट्वीटर एकाउन्ट बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ढकालका अनुसार अकाउन्ट भेरिफाइ गर्दा राखिएको आइडेन्टिटी र इन्फरमेसन बाहिरिएको शंकापछि ट्वीटर एकाउन्ट बन्द गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका सूचनाहरु सार्वजनिक गर्नका लागि सो ट्वीटर प्रयोग हुँदै आएको थियो । अब नयाँ ट्वीटर एकाउन्ट चाँडै बनाएर संचालनमा ल्याइने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ एकाउन्ट भने फायरवाल सेक्युरिटी सिस्टमका साथ सञ्चालनमा ल्याने बताइएको छ । बन्द भएको ट्वीटर एकाउनट राष्ट्रपतिको प्रेस सचिवालयले सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यसअघि सो एकाउन्टबबाट अनलाइन पोर्टलको समाचार सेयर भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले धेरै आलोचना खेप्नु परेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा डिपफेककाे बढ्दाे प्रयाेग- के हाे डिप फेक जान्नलाई पढनुहाेस
एजेन्सी । तपाईंले कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विपक्षी दलका कुनै नेतालाई खुलेआम गालीगलौज गरेको भिडियो देख्नु भएको छ ? वा रेखा थापाको कुनै पोर्न भिडियो हेर्नु भएको छ ? या त कुनै महत्वपूर्ण अहोदामा बसेको व्याक्तिबाट कुनै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति ? यस्ता सामाग्रीहरु फेसबुक तथा अन्य कुनै किसिमका सामाजिक सञ्जालमा देख्नु भएको खण्डमा तपाईं के गर्नुहुन्छ ? त्यसलाई तत्काल शेयर गरेर सनसनी बनाउनमा योगदान दिनु हुन्छ ? वा त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहुन्छ । भिडियो वा तस्विरमा देखेको त्यस्तो दृश्यलाई तपाई कुन आधारमा सही हो वा विकृत भनेर पहिचान गर्नुहुन्छ ? जब कदकाँठी, आवाज, अनुहार सबैको भाव अभिव्यक्ति एउटै हुन्छ भने तपाईं कसरी यी कुरामा विश्वास नगरी रहनसक्नुहुन्छ । तर एआई प्रविधिसँगै विकास भएका अल्गोरिद्म तथा मेसिन लर्निङ यति धेरै अत्याधुनिक बनिसकेका छन् । यसकारण तपाईले देख्ने र सु